Factory-1 Factory - Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra China
laboratoara fanadihadiana 1000W ultrasound homogenizer
Ny homogenizing ultrasonic dia dingan'ny mekanika hampihenana ireo sombintsombiny kely ao anaty ranon-javatra ka lasa kely sy mitovy zarazaraina. Rehefa ampiasaina ho toy ny homogenizers ny processeur ultrasonic, ny tanjona dia ny hampihenana ireo sombintsombiny kely anaty rano hanatsarana ny fitoviana sy ny fitoniana. Ireo sombintsombiny (manaparitaka dingana) dia mety ho soloina na ranoka. Ny fihenan'ny savaivony potika dia mampitombo ny isan'ny sombintsombin'ny tsirairay. Izany dia mitarika amin'ny fihenan'ny salanisan'ny par ...
Ny fampifangaroana vovoka amin'ny rano dia dingana mahazatra amin'ny famolavolana vokatra isan-karazany, toy ny loko, ranomainty, shampoo, zava-pisotro, na media fanaovan-gazety. Ireo sombintsombiny tsirairay avy dia mihazona ny hery manintona misy karazany ara-batana sy simika, ao anatin'izany ny herin'ny van der Waals sy ny fihenjanan'ny rano. Ity vokatra ity dia matanjaka kokoa noho ny ranon-javatra viscosity avo lenta, toy ny polymers na resins. Ny hery manintona dia tsy maintsy resena mba hanaparitahana sy hanaparitahana ireo sombintsombiny ho li ...
Mpangaro amin'ny fanaparitahana ultrasonic
Ny fampiharana mifangaro dia ahitana indrindra ny fanaparitahana, ny homogenisation, ny emulsification, sns. Ny ultrasound dia afaka mampifangaro fitaovana samihafa amin'ny hafainganam-pandeha haavo sy mahery vaika. Ny mixer ultrasonic ampiasaina amin'ny fampifangaroana ny fampiharana dia miavaka indrindra amin'ny fampidirana solids mba hanomanana fanamoriana iraisana, ny fanaparitahana ny sombintsombiny hampihenana ny habeny, sns. -BL20L Frequency 20Khz 20Khz 20Khz Powe ...
Fitaovana fampifangaroana ranoka ultrasonic
Fitaovana fanaparitahana ultrasonic 3000W
Ity rafitra ity dia ho an'ny fanodinana ranon-javatra viscosity kely manify, toy ny menaka CBD, black carbon, nanotubes carbon, graphene, coatings, fitaovana vaovao momba ny angovo, alumina, fikarakarana nanoemulsions.
Sonicator homogenizer Laboratoara ultrasonika
Ny sonication dia fiasa amin'ny fampiharana angovo azo akarina mba hanangona ny sombintsombiny amin'ny santionany, ho an'ny tanjona maro samihafa. Ny sonicator ultrogen homogenizer dia mety manelingelina ny sela sy ny sela amin'ny alàlan'ny onja sy ultrasonika. Amin'ny ankapobeny, ny homogenizer ultrasonic dia manana tendrony izay mihetsiketsika haingana be, ka miteraka vovoka amin'ny vahaolana manodidina mba hamorona haingana sy hirodana. Izy io dia miteraka onja manety sy manaitra izay mampisaraka ny sela sy ny sombiny. Ny sonikatorika homogenizer ultrasonic dia ampirisihina amin'ny homogenisation ...